नेपाली भन्ने अनुहार, व्यवहार र संस्कृतिको मानक स्थापना गर्ने रहर छ
classickhabar २०७४ असार ११ आइतबार प्रकाशित
कुशुम ज्ञवाली,एनसीसी सदस्य पदका उम्मेदवार, क्यालगरि सिटि , क्यानडा
एआआएरनए क्यानडाको नेता बन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
हो, एनअारएन अभियानमा म प्रत्यक्ष परोक्ष ढंगले सहभागी छु। यसपल्ट नेतृत्वमा जान नेपाली समुदायसँग अनुमति मागेको छु।
यो सोच एनआरएन क्यानडाको प्रतिनिधी बन्नेमा सिमित रहन्छ या सिंगो एआरएनकै नेता बन्नेसम्म पुग्छ ?
यसपल्ट म एनअारएन क्यानडामा मात्र सिमित रहन्छु। क्यानडाबाट पूर्व अध्यक्षहरू, पूर्व महासचिवहरूलाइ छानेर विश्व सम्मेलनमा प्रतिनिधी पठाउने चलन छ त्यो सम्भावना अागामी दिनकालागी। मेरो चाहाना एकपल्ट विश्वसम्मेलनमैबाट नेतृत्व जिम्मालिने पनि छ। तर त्यो प्रकृयामा छु। म नेतृत्वका लागी हतार गर्न हुदैन समयको निर्माण गर्नुपर्छ भन्छु। अर्को कुरा मेरा एजेन्डाहरू स्थापित हुदै जाँदा मेरो नेतृत्व स्थापित हुँदै जाने कुरा हुन्छ। म निरन्तर, समयसापेक्ष गतिमा सामुदायिक नेतृत्वमा जाने कुरामा विश्वास गर्छु। job connection भन्नाले धेरैको जागीर जोखिममा छ यहाँ। यसको सुरक्षाका लागी धेरैवटा कम्पनीका ह्यूमन रिसोर्स म्यानेजनरसँग एनअारएन क्यानडाको एउटा स्थायी युनिट बनाएर त्यसले सम्पर्क गरिरहने र नेपाली प्रोफेसनलहरूको बलियो र प्रभावकारी नेटवर्क बनाएर कसैलाइ पनि जागिर चाहिदा, राम्रा अपरच्युनिटीमा नेपालीलाइ प्रवर्दन गर्ने लक्ष्य छ। यसले बहुअायामिक प्रभाव रहन्छ। समुदायका वीचमा राम्रो सम्वन्ध अर्थात नेपाली विचमा असल सम्वन्ध विकास हुदै जान्छ। जागीरको समस्या हुदैन। यसले चैातर्फी सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
एनआरएनको प्रतिनिधी बन्ने रुचि चाहि किन नि ?
एनअारएन प्रतिनीधी बन्ने समाजसेवाका लागी। यो मन्च बिदेशमा नेपाली भाषा, सस्कृति र नेपाली-पहिचान प्रवर्दन गर्न सक्ने सँस्था हो। विदेशमा हामी नेपाली भनेर चिनाउन पहिचान स्थापित गर्न गाह्रो छ। हेर्दा हामी फोलिपिनी, इन्डिएन, तिब्बति वा कोरिएन जस्ता देखिन्छैा । नेपाली भन्ने अनुहार व्यवहार र संस्कृतिको मानक स्थापना गर्ने रहर छ। म नेपाली भने पछि इमानदार, निडर, मेहनति मध्यम उचाइका मायालु जाति भनेर बिश्वमा चिनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने रहर मुख्य मोटोभेसन हो मेरो ।
गैरआवासिय नेपालीको साझा संस्था एनआरएन तमाम प्रवासी नेपालीको साझा संस्था बन्ने सकेको छ कि छैन तपाईको दुई दशकको प्रवास वसाईको अनुभवमा ?
एनअारएन क्यानडा तमाम प्रवासी वीचमा पुगेर सम्वन्ध स्थापित गर्न सकेको छैन। 15-20 प्रतिशत प्रवासीलाइ मात्र समेट्न सकेको छ यद्यपी यो सबै भन्दा बढी फैलिएको र विस्तारित सँस्था हो। म कम्तिमा बहुमत नेपालीहरूको वीचमा पुगेर दुखसुखको साथी बन्ने सँस्थाको रूपमा क्यानडामा प्रबर्धन गर्न यसमा पुनूसँरचनाको प्रस्ताव पनि मेरो चुनावी एजेन्डा को रूपमा अगाडी सारेको छु। यसलाइ संघिय स्वरूपमा लगेर स्थानीय तहमा रहेका नेपाली समुदाय/समाजलाइ जोड्न चाहान्छु। यसका लगाी कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरी एनअारएन क्यानडाको विधानमा संशोधन गरी कार्यन्वयनको सपना छ मसँग ।
आम प्रवासी नेपाली दाजुभाइले सामना गरिरहेका समस्या एवं विशेष गरि क्यानडामा रहेका नेपालीले फेस गरेको समस्या चाहि के के हुन ?
एनअारएन क्यानडालाइ अझबढी प्रभावकारी बनाउन र त्यसले अाधालाख नेपाली मुलका परिवारसम्म बिस्तार गर्न मसँग भिजन छ, मेरो लामो सामुदायिक कामको अनुभवले मलाइ यस कार्यमा सफलता मिल्न सक्छ भन्ने लाग्छ। म एनअारएनमा कुनै प्रोडक्ट बेच्न र कमिसन बटुल्न जान लागेको होइन । एनअारएन क्यानडाको ब्यानरलाइ दुरूपयोग गरेर अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिइ मानव तस्करीमा सम्लग्न एउटा वर्ग र प्रवृतिको नियन्त्रण र व्यबस्थापनका लागी एनअारएनमा इमानदार तथा विश्वसनीयता भएको नेतृत्वको जरूरी छ। नेपालीहरूको मुख्य समस्या राम्रो जागीर, ब्यापार प्रवर्दनको अबसरमा कमी, अार्थिक उपलब्धी उल्लेख्य हासिल नहुनु। सामुदायिक सँस्थाहरूमा हुने राजनैतिक खिचातानी जस्ता कुरा हाम्रा मैालिक समस्या छन् । सानो पूंजी लगानीको प्रभावकारी संयोजन र अार्थिक फाइदा हुने अबसर श्रृजना गरी सम्बृद्दी तर्फ लैजान हामीले धेरै गर्न बाकी छ।
एनआरएन नेपाल र नेपालीप्रतिको दायित्वमा कति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाउनुहुन्छ ?
नेपालप्रतिको दायित्व वोध गर्ने एनअारएन सबै भन्दा ठूलो सँस्था हो। नेपालप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेको छ तर यसभन्दा बढी र प्रभावकारी बोध गर्ने बनाउन सकिन्छ। नेपालमा एफडीअाइ लगानी, प्राकृत प्रकोपमा सहयोग, समाजसेवी कार्यहरू धेरै कुरा निरन्तर कार्यक्रमको रूपमा गर्न सकिन्छ त्यो मेरो अर्को महत्वपुर्ण एजेन्डा हो।
एनआरएन क्यानडालाई आफ्नो घर जस्तो अनूभूत गराउने गरि पुर्नसंरचनाको सोचमा भन्नुभएको छ , कसरी सम्भव छ त्यो ?
नेपालीको भावनात्मक घरको रूपमा एनअारएनलाइ बिकास गराउन स्थानीयरूपमा रहेका नेपाली सँस्थाको क्यानडाब्यापी नेटवर्कको रूपमा एनअारएनलाइ बिकास गर्न चाहान्छु। स्थानीय नेपाली समाजको संरचना सँग समाहित गरी हाम्रो देनिक अावश्यकताका लागी चाहिने छरछिमेकको सहयोग पाउने दिने माध्यम एनअारएन बन्ने वातावरण बनाउन चाहान्छु। यसका लागी क्यानडाको संघीय संरचना अनुसारले एनअारएनलाइ पुनर्संचना गरी ग्रासरूट सम्म जाने मार्गप्रसस्त गर्न सकिन्छ। खेलकुद, सास्कृतिक कार्यक्रम, मनोरन्जन र प्रोफेसनल बिकासका सबै अायाममा एनअारएनलाइ जोडेर एनअारएन हाम्रो अभिभावक बन्ने बतावरण बनाउँछु।
तमाम प्रवासी नेपालीको भलाई अनि मातृभूमि नेपालको समृद्विको लागि एनआरएनको भूमिका कति रचनात्मक लाग्छ तपाईलाई ? रचनात्मक कसरी हुनसक्छ ? तपाईको मार्गचित्र कस्तो छ ?
एनअारएन कुनै सरकारी संरचना होइन न त विदेशी दातृ निकायका रकमको तलब खाएर चल्ने संस्था हो। नितान्त स्वयमसेवी रूपमा चल्ल्ने हुनाले यसलाइ अधिक समाबेसी इन्क्लुसिभ बनाउदै लगेर भोलुन्टिएर परिचालन गरेर, समुदायका अावश्यकता र अफ्ठेराका कुरा सल्टाउने गतिशील संस्थाका रुपमा प्रवर्दन गर्न चाहान्छु